Home News Wax-badan ka ogoow qodobada laga filan karo shirka Xaraashka kheeyraadka dalka ee...
Wax-badan ka ogoow qodobada laga filan karo shirka Xaraashka kheeyraadka dalka ee Lonodon (Maxaa laga filan karaa??)
Maanta waxaa Magaalada london ee dalka Ingariiska lagu qabanayaa shir lagu iibgeeynaayo shidaalka iyo kheeyraadka kale ee dalka kaasi oo ay aad u daneeynayaan Kooxda heeysa hogaanka Dalka ee Nabad iyo Nolol.
Dhowr xubnood ee badankood aan sumcad wanaagsan ku laheeyn dalka ayaa loo diray shirkaasi kuwaasi oo aan kala jecleeyn in dalka oo dhan la iib-geeyo iyo in kale,waxaana bulshadu ay u aqoonsan yihiin qaa;nul wadaniyiin la ogsoon yahay.
Shirkaasi ayeey aad uga murugoosan yihiin umadda Soomaaliyeed,waxaana la filayaa in lagasoo saaro qodobo qarsoodi ah iyo kuwa qeexan kuwaasi oo dhamaantood lagu xalaaleeysanaayo Shidaalka dalkeeyna.
Waxaa laga filan karaa oo kaliya in Kooxda NABAD iyo NOLOL ay ku guuleeysatay xaraashka dalka iyadoo la ogsoon yahay Heshiiskii shirkad shiineeska ah lala galay taasi oo hada guraneeysa Kaluunkii dalkeeyna oo dhan.
Umadda Soomaaliyeed ayaa quustaagan waxaana aamusan Xildhibaanadii ay soo doorteen kuwaasi oo ugu yaraan la islahaa waxaa ay celin doonaan boobka iyo baabi’inta qaranka